Ezinye iindlela zokufuduka zisuka kwiWindows XP ziye Windows 7 / 8.1 | Iindaba zeGajethi
Ithuba lokwenza imfuduko ukusuka kwiWindows XP iye kwindlela yokusebenza ephezulu yenye yezona zinto ziphambili ekufuneka siqale ukuzithatha ukusuka apho; Kuba le nkqubo yokusebenza ayisayi kuphinda ixhaswe ukusukela nge-8 ka-Epreli ngokwe-Microsoft, isenokuba lixesha lokuba ukwazi uyazi ukuba ikhompyuter yethu inesakhono (kunye nokuhambelana) ukuxhasa Windows 7 kwimeko elungileyo.
IMicrosoft inyanzelise ukuba abasebenzisi beWindows XP bazame ukufudukela kwiWindows 8.1 ikakhulu, bade banikezela ngebhonasi yeedola ezingama-50 kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuze abasebenzisi bayo bafumane ikhompyuter yesizukulwane esitsha kwivenkile yayo. Ngoku, ukuba ikhompyuter yakho ayinazo iimfuno eziyimfuneko zokuxhasa olona hlobo lutsha lucetywayo yinkampani, mhlawumbi kwimeko elungileyo ukuba uyamkela Windows 7, into esiza kukufundisa ukuba uyifumane kweli nqaku.
Hambisa ulwazi kwaye uqinisekise ukuhambelana kwiWindows XP
Ngaphambi kokuqala nayiphi na inkqubo ye- hlaziya kwinkqubo ephezulu yeWindows XP, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufuduka kweyona datha ibaluleke kakhulu kule nkqubo yokusebenza; Ukuba awazi ukuba ungayenza njani, sicebisa ukuba uphonononge inqaku apho besifundise khona indlela echanekileyo hambisa iprofayile yomsebenzisi ukusuka kwenye inkqubo yokusebenza ukuya kwenye ephezulu njengendlela ye ugcino oluncinci; Ngoku, izinto ezahlukeneyo zeendaba zikhankanya intsebenziswano phakathi kweMicrosoft kunye nesixhobo esibizwa ngokuba yi-PCMOver Express, onokuyisebenzisa kwiWindows XP ngokupheleleyo ngaphandle kwentlawulo ngenxa yesivumelwano phakathi kwezi femu zombini.
Phakathi kwezona mfuno zibalulekileyo athe uMicrosoft wakhankanya ukuba ikhompyuter ikwazi ukwamkela inkqubo yokusebenza edlula kwiWindows 7 zezi zilandelayo:
Imemori ye-1 GB ye-RAM yeekhompyuter ezingama-32-bit okanye i-2 GB yeekhompyuter ezingama-64-bit ukuba ufuna ukuphucula kwiWindows 7.
Iprosesa ene-1 GHz isantya (okanye isantya esiphezulu).
Ubuncinci i-16 GB yendawo yasimahla kwiikhompyuter ze-32-bit, okanye i-20 GB kwiikhompyuter ze-64-bit yofakelo lwedatha.
Ikhadi lemizobo elixhasa iDirectX 9 kunye nomqhubi ohlaziyiweyo.
Uninzi lwezi nkcazo zinokuqwalaselwa njengesiqhelo, nangona ukuba sithathela ingqalelo oko IWindows XP imalunga neminyaka eli-13 ubudalaMhlawumbi ezo khompyuter zinayo le nkqubo yokusebenza ukusukela ngelo xesha, azinazo ezi mpawu; Ukuba sifuna ukuba neemfuno eziyimfuneko zohlaziyo kufuneka sisebenzise isixhobo esinikezwe yiMicrosoft, enegama Windows 7 Ukuphucula uMcebisi kwaye oya kuthi asazise ukuba kukho ukungangqinelani nezixhobo, abaqhubi kunye nokusetyenziswa ngeWindows 7.
Iscreen esifana nesiboniswe ngasentla sinokubonakala ukuba ikhompyuter yethu iyahambelana neWindows 7 ngaphandle kweempazamo ezifunyenweyo.
Ngoku ukuba sifuna ukuya phambili kancinci mhlawumbi siziva sinomdla kwaye sinqwenela faka iWindows 8.1 kwikhompyuter yethu; koku kukho isixhobo esibonelelwe yiMicrosoft, enegama le Umcebisi woPhuculo lweWindows 8 kwaye singayisebenzisa ngendlela efanayo nale siyikhankanyileyo ngasentla; Ngokumalunga neenkcukacha ezifunekayo njengokuhambelana, ziyafana kakhulu nezo zicelwe yiWindows 7.
Nje ukuba sikhuphele kwaye sisebenzise iWindows 8 yokuPhucula uMcebisi, isikrini esamkelekileyo siya kusibonisa impumelelo kunye neempazamo ezifumaneka kwikhompyuter yeWindows XP.
Umfanekiso esiwubeke ngaphezulu ngumzekelo omncinci woku nangona, oku kunokuba lula ukusonjululwa ngendawo yokugcina engaphezulu. Siyibekile kuba iikhompyuter ezindala (kwiminyaka eli-13 eyadlulayo) inokuba zisebenzise idiski encinci encinci yeWindows XP, into, kwelinye icala, ngoku isilela kwiWindows 8.1.
Kuba iWindows XP iya kuqhubeka ikho ixesha elide kodwa ngaphandle kwenkxaso okanye uncedo oluvela kuMicrosoft, kufanelekile ukuba uqwalasele ezi ndlela zezinye iindlela; Ukuba ikhompyuter yakho ayihambelani nazo naziphi na iinguqulelo esele sizikhankanyile, mhlawumbi ungazama faka kulo naluphi na uhlelo lweLinux, kuba azifuneki njengaleyo icetyiswayo nguMicrosoft kwiinkqubo zayo zokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Indlela yokufuduka kwiWindows XP ukuya kwiWindows 7 okanye yeWindows 8.1
Indlela yokuqalisa kwiWindows 7 ngeNdlela ekhuselekileyo